यस्ता छन्, ज्वानोको फाइदा - ज्ञानविज्ञान
यस्ता छन्, ज्वानोको फाइदा
पेट फुलेको बेलामा भुटेको ज्वानो एक चम्चा र थोरै बीरेनून मिसाई पिस्ने र त्यो पाउडरलाई एकडेढ चम्चा तातो पानीसँग खाने गर्दा पेट फूल्ने समस्या ठिक हुन्छ ।
कुनैपनि महिला सुत्केरी हुदाँ दूध कम भएमा ज्वानोको प्रयोग बढी गर्नाले महिलाको स्तनमा दूध बढ्दछ । महिलाहरुमा सेतो पानी बग्ने समस्या भएमा नियमित रुपले चौलानी पानीमा भुटेको ज्वानोको पाउडर राखी फिटेर केही महिनासम्म पिउने गर्दा सुधार हुने गर्दछ ।
ज्वानोमा प्रशस्त मात्रामा क्याल्सियम रहेको हुन्छ, जसले गर्दा क्याल्सियम बढी आवश्यक पर्ने बालबालिकाहरू, बुढाबुढी तथा सुत्केरीहरूले ज्वानोको नियमित प्रयोग गरेमा फाइदा हुने गर्दछ ।
नेपालमा ज्वानोको प्रचलन सुत्केरी अवस्थामा महिलाहरूका लागी भने धेरै गर्ने गरेको पाईन्छ । बच्चा र आमा दुबैको स्वास्थ्यको लागि परापूर्वकालदेखि ज्वानोको प्रयोगलाइ निकै लाभदायक मानिएको छ ।
ज्वानोले पाचनशक्ति बढाउँने मात्र भनै हानीकारक जीवाणु एवम् कृमिनाश गर्दछ । यसले वायुविकार हटाउँछ । गर्मी, सर्दी दुबै मौसममा अनुकुल हुने ज्वानोले मानिसहरूलाइ धेरै फाइदा पुर्याउँदछ ।
ज्वानोको प्रयोग पेटको दुखाइ कम गर्न, पेटका कृमिहरु नाश गर्न र पाठेघर सबल पार्नका लागी गर्दा फाइदाजनक हुने गर्दछ । आयुर्वेदमा त ज्वानोको बढी प्रयोग गर्दा हानी देखिएमा धनियाँको प्रयोग गर्नुपर्ने कुरा लेखिएको पाइन्छ ।
Topics #ज्वानोको फाइदा
Don't Miss it यस कारण घातक हुन्छ दिउँसो सुत्न
Up Next यी कुरा नगर्नुहोस् राती सुत्नु अघि पार्टनरसँग
गुणकारी ओखरको सेवनले हाम्रो स्वास्थ्यमा निकै फाइदा पुर्याउछ जान्नुहोस्
ओखर विभिन्न भिटामिनको राम्रो स्रोत हो । ओखरमा शरीरलाई चाहिने भिटामिन–ई, भिटामिन–बी, भिटामिन–बी ६ जस्ता अत्यावश्यक तत्व पाइन्छ अनिद्राको समस्या…
के खुसार्नीको पनि एक्स्पाईरी डेट हुन्छ ? थाहापाउनुहोस्
के खुसार्नीको ‘एक्स्पाईरी डेट’ हुन्छ ? अर्थात के अन्य खानेकुरा झै सिमति मिति भित्र खुर्सानीको प्रयोग गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ? बोटबाट…
यसो गर्नु भयो भने जीवन २ मिनेटमा नै सफल हुन काफी हुन्छ
संसारमा सायदै कोहि छैन होला जो आफ्नो जीवन सफल पर्न नचाहोस । मानिस सफल या असफल हुन उसको बानि…
के कारण झर्छ पुरुषहरुको कपाल ? जान्नुहोस
तनाव : तनाव बढ्दा पनि पुरुषहरुको कपाल झर्नसक्छ । तनाव बढदा शरीरको हर्मोन्सको व्यालेन्स विग्रन्छ । यसले कपाल भर्नेको समस्या…
यस्ता छन्, केराका फाईदा
केरालाई मन नपराउने सायद मानिसनै हुदैन होला । यो फल बाल बच्चादेखि लिएर बृद समेतले मन पराउछन् । केरा खानमा पनि निकै…